Raad Raac News Online – Haweenay ku bixinaysa guurkeeda 5 milyan oo Sucuudi ah (milyan iyo 330 kun $).
Haweenay ku bixinaysa guurkeeda 5 milyan oo Sucuudi ah (milyan iyo 330 kun $).
Faarax December 31, 2012 Comments Off on Haweenay ku bixinaysa guurkeeda 5 milyan oo Sucuudi ah (milyan iyo 330 kun $).
Haweenay u dhalatay dalka sucuudiga ayaa waxay ay sheegtay in ay diyaar u tahy in ay siiso ninka ogolaada inuu guursado lacag dhan 5 milyan oo riyaalka Sucuudigaa una dhiganta hal milyan iyo 330 kun oo doolarka dalka Maraykanka ah,iyada oo diiday in ay soo bandhito magaceeda balse waxa ay la soo xidhiidhay joornaalka maalinlahaa ee dalkasi ka soo baxa ee Alru’aa iyadoo ka dalbatay in ogaysiiskaasi loo shaaciyo .
Haweenaydan oo lagu tilmaamay maal qabeen ayaa waxy ku xidhay ninka doonaya inuu guursado in uu ladago aqalkeeda wayn iyo laba shardi oo ay u soo bandhigi doonto marka uu la soo xidhiidho iyada uu joornaalkan u dhaxayn doono labada dhinac.
Haweenaydan ayaa tibaaxday in aysan wax qiima ah la lahayn lacagtu hase yeeshii ay raadinayso oo kaliya ninkay ku dagi lahayd,waxayna ka codsatay ninka doonaya in inuu guursado in taleefankiisa ku dhaafo jornaalka iyaduna ay soo wici doonto.
Dhacdadan ayaa ah mid aan ugub ku ahayn Dalka sucuudiga iyadoo joornaalda dalkaasi lagu soo daabacayay ogaysiisyo kuwan lamid ah haba kala duwanaadaan qiimaha la soo bandhigayay waxaana xusid mudan ain aan ninka ogolaada guurkan oo kale looga fadhiyen arimaha dabiicigaa ee ku caanka ah guurka sid biilka iyadoo ay haweenaydu u xil saarantahay .